कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ? Limb Twitching (तस्विर सहित) – Hindu Cultural Center
Home Event Calendar कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ? Limb Twitching (तस्विर सहित)
कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ? Limb Twitching (तस्विर सहित)
सामुद्रिक शास्त्रअनुसार अंग फरफराउँदा के फल हुन्छ ? (तस्विर सहित)
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार हाम्रो शरीरका हरेक अंगको विशेष महत्व छ । हरेक अंग प्रत्यंगको चालले भविष्य र स्वभाव निर्धारण गर्छ । हाम्रो शरीरका अनेक अंगमा हुने प्रतिक्रियाले पनि विशेष अर्थ राख्छ ।
समुन्द्र शास्त्र अनुसार कुनै पनि अंग फरफराउँदा त्यसको विशेष अर्थ हुन्छ । सामान्यतः पुरुषलाई दायाँ अंगले राम्रो र महिलालाई बायाँ अंगले शुभ फल दिने समेत समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ ।
कुन अंग फरफराउँदा के अर्थ ?
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिको दुवै गाला फरफरायो भने धनलाभ हुन्छ ।
यदि दायाँ काँधमा फरफर भयो भने बुझ्नुस् तपाइँलाई फाइदा मिल्ने वाला छ ।
कहिले काँहि कन्चटमा पनि फरफर अनुभव हुन्छ । यदि कन्चट फरफरायो भने आर्थिक लाभ हुन सक्छ ।
४ निधारमाथिको भाग
निधारमाथिको भाग फरफरायो भने बुझ्नुस् तपाइँलाई सम्मान मिल्ने वाला छ । यसले भौतिक सुख र समृद्धी बढ्ने संकेत पनि गर्छ ।
५ बायाँ काँध
यदि कुनै पनि ब्यक्तिको बायाँ काँध फरफराउँछ भने त्यसले सफलताको संकेत गर्छ ।
६ निधारको तल्लो भाग
निधारको तल्लो भागमा फरफर गरेमा यसले पनि शुभ संकेत गर्छ । यसले तपाइँलाई बढुवा वा उच्च पद मिल्ने संकेत गर्छ ।
७ दायाँ खुट्टो
पुरुषको दायाँ खुट्टो फरफराएमा यसले अशुभ संकेत गर्छ । यसले मान सम्मानमा हानी हुने मानिन्छ ।
८ बायाँ खुट्टो
तपाइँको बायाँ खुट्टो फरफरायो भने यसले लामो यात्रा हुने संकेत गर्छ ।
९ दायाँ आँखा
पुरुषलाई दायाँ आँखा फर्किनुको अर्थ शुभ मानिन्छ । दायाँ आँखा फर्किँदा ब्यक्तिको चाहाना पुरा हुने समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ । स्त्रीका लागि दायाँ आँखा फरफराउनु अशुभ मानिन्छ ।
१० बायाँ आँखा
कुनै पनि पुरुषको बायाँ आँखा फरफराएमा अशुभ मानिन्छ । यसले तपाइँलाई नोकशानी हुने वा खराव खबर पाउने संकेत गर्छ । तर स्त्रीका लागि बायाँ आँखा फरफर गर्नु राम्रो मानिन्छ । यसले शुभको संकेत गर्छ ।
ओंठको दाइने भाग फरफरायो भने राम्रो खानेकुरा प्राप्त हुने संकेत गर्छ । नयाँ साथीसँग भेट हुने सम्भावना पनि हुने समुन्द्र शास्त्रको भनाइ छ । तर तल्लो भाग फरफरायो भने झगडा पर्ने संकेत गर्छ ।
नागपन्चमी – महत्व र विशेषता
भर्जिनियावासीहरुको सामुदायिक भवन, थप चुनौती र संभावनाहरु